Maitiro ekudzora kushambadzira kuteedzera pane yako iPhone uye iPad | IPhone nhau
Chimwe chinhu icho vashandisi vazhinji vasingazive ndechekuti yega yega Apple ID account ine yekuzivisa yekuzivisa yakapihwa kwairi. Nenzira iyi, pese patinopinda neiyo Apple ID, kungave pa iPhone, iPod touch, iPad kana Apple TV, Apple inoverenga chitupa chedu pamaseva ayo kuti iite yakasimba kushambadzira yekutevera kuburikidza nemaapplication. Kuburikidza nekuunganidzwa kweiyi data isu tinopihwa yakanangwa kushambadzira. Ini pachangu handisi mumwe wevanyengeri vanotenda mune odyssey yekudzivirira kuongororwa kwatinoitirwa, asi ndinodawo kuita kuti zvinhu zviome zvishoma nguva nenguva. Tichazotsanangura nzira yekuganhurira kushambadzira yekutevera pane yako iPhone ne iPad, nekudaro isingabvumidze Apple kuziva zvatinoda uye tipei nekushambadzira kwakatsaurirwa.
Izvi zvinogona kuve zvakanaka uye zvakaipa, nekuti pamwe zvirinani kugamuchira kushambadzira kwakatsaurirwa kune zvatinofarira pane kutambira kushambadza-chidimbu-kushambadzira pasina hanya. Aya ma ads anoenderana nezvatinofarira ndeaya anowanikwa mune echitatu-bato kunyorera izvo zvinofungidzirwa kuti zvakasununguka asi izvo zvinosanganisira kushambadzira kuitira kuti vazviriritire pachavo nemari. Saizvozvowo, Apple inoshandisa ichi kushambadzira kuteedzera zvakare muApple News uye muWallet, kuti uwane zvakanyanya sezvinobvira nezve izvo isu zvatinoda kuisa mari yedu pane.
Neraki, Apple ikambani ine hanya nezvedu zvakavanzika, saka inotipa mukana wekubvisa kana kupedza iyi kushambadzira yekutevera, uye ndizvo zvatiri kuda kukuratidza nhasi, maitiro ekudzora kushambadzira kuteedzera kuburikidza neyedu iOS kifaa, mukuwedzera, rega kuzvinyoresa system Mune chinhu chimwe chete chinozopihwawo mune mamwe mafaera atakabatana neApple ID. Nekudaro, ini ndaona kuti pese paunonyora chishandiso chitsva, ndiko kuti, iwe unotanga chishandiso chitsva neApple ID yako, iyi yekushambadzira yekutevera inoiswazve uye inoshanda zvekare.
Kutenda nehunyanzvi uhu makambani akaita seGoogle anowanzo shandisa kuratidza kushambadza data zvinoenderana nezvatinofarira, vanowana mari yakawanda, asi mari zhinji. Nekudaro, aya mabasa haatitenderi kuti tizivikanwe zvachose, iyo data yakavharidzirwa uye haina kuzivikanwa. Iwo maseva anongounganidza akadai sevakadzi, zera uye dzinza mavambo, hapana dhata inoenderana neyedu ruzivo rwemunhu inotibvumidza kuti tizivikanwe zvachose. Uyezve, sekureva kwaApple, iyo iAd system haitengese kana kuendesa chero ruzivo rwedu rwevanhu kune vechitatu vanowana.
Chii chatinowana nekudzikamisa inotevera?
Nekudzima kushambadzira kwekutevera, hatirasikirwi neshambadziro, hapana nzira yekubvisa izvo sezvo zviri izvo sosi yemari yezvikumbiro zvakawanda, kushambadza kwacho kungorega kutungamirwa, ndiko kuti, kune zvatinofarira. Tinokuratidza maitiro ekuzvimisa.
Isu tinoenda kune yekuzvarwa marongero mashandisiro eiyo iPhone kana iPad
Tangopinda mukati, tinoenda kuchikamu «Privacy«
Mukati isu tichawana switch «Limit tracking«, Kuti isu tichafanirwa kumisikidza
Zvakare pazasi ndeapo mukana we "Gadzirisazve chiziviso chekushambadzira ..." kana tikachimanikidza, yedu yekushambadzira uye yekutevera data ichadzimwa kubva kune chero server (tinodzokorora kuti hakuna ruzivo rwemunhu)
Asi izvi hazvifanire kunge zviri zvese, tinogona kuwedzera kugadzirisa zvese izvi nekuremadzawo kushambadzira kwenzvimbo, saka tichazowanawo mukuita kwebhatiri, uye zvinonetsa. Nekudaro, aya maBeacon anowanzo tenderera isu kunakirwa zvinopihwa muzvitoro zvakasiyana.
Tangopinda mukati, tinoenda kuchikamu «Nzvimbo«
Mukati meNzvimbo tichaenda ku "System Services"
Isu tinoremadza «maAds nenzvimbo«
Ndiko kureruka kwatichaita kudzora kushambadzira kuongorora pane edu maIOS zvishandiso, ndechimwe chinhu chandinoita netsika kuita pane yega kifaa chandinowana, kunyanya vhezheni yesystem services nekuda kwezvikonzero zvebhatiri, sezvo iri basa rakawedzera kune iro re « Kakawanda nzvimbo 'chaidzo dzinokanganisa bhatiri rako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzora kushambadzira yekutevera pane yako iPhone uye iPad
Inhema kuti hapana nzira yekubvisa iyo ma ads nekuti aripo.
Kune akawanda maficha senge Adblock yeIOS anoshandiswa pane izvi uye unogona kudzivisa kushambadza mumabhurawuza uye "emahara" mafomu anoratidza kushambadza.